Home Child Care ကလေးငယ် အနိုင်ကျင့်ခံနေရပြီဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲ?
ဘယ်သူကမှ သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို အနိုင်ကျင့်တာ၊ အနိုင်ကျင့်ခံရတာတွေ မလိုချင်ပါဘူး။ ကလေးတွေဟာ အိမ်အပြင်ရောက်တဲ့အခါ မိဘတွေရဲ့ မျက်ကွယ်ရောက်သွားတာကြောင့် အပြည့်အဝဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပါဘူး။ ဒီတော့ မိဘတွေရဲ့ မျက်စိကွယ်ရာမှာ ကလေးငယ်အနိုင်ကျင့်ခံနေရပြီဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
၁။ ပစ္စည်းများ ပျောက်ဆုံး (သို့) ပျက်စီးခြင်း
စစ်တမ်းတွေအရရဲ့ ၂၉ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေရှိပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ဂရုစိုက်ပါ။ စာအုပ်များ၊ အသုံးအဆောင်များ၊ အဝတ်အစားများ (သို့) လက်ဝတ်ရတနာတွေလိုမျိုးစသဖြင့် သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုများ ပျောက်ဆုံးခြင်း (သို့) ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းရှိမရှိကြည့်ပါ။ သူတို့ရဲ့ ပစ္စည်းတွေကို သူတို့ထံမှ ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် ကျိုးပဲ့ပျက်စီးခြင်းက သူတို့နာကျင်စေခြင်းရဲ့ နိမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းဟာ ကလေးတွေကို သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးကို စတင်မေးခွန်းထုတ်စေပါတယ်။ ဒီအချက်က သူတို့ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လေးစားမှုကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ ခေါင်းကို အရမ်းငုံ့ထားတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် အရမ်းနူးညံ့တဲ့အသံတွေနဲ့ ပြောတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့က စကားမပြောဘဲနေတာမျိုးတွေလည်း လုပ်ကြပါတယ်။
၃။ အိပ်မပျော်ခြင်း (သို့) အိပ်မက်ဆိုးမက်ခြင်း
သင့်ကလေးဟာ ရုတ်တရက်အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်ခဲခြင်း (သို့) မကြာခဏအိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်ရတဲ့အခါ ၎င်းက အနိုင်ကျင့်ခံခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းဟာ ကလေးတွေရဲ့ အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးအပေါ် တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို ညဘက်တွေမှာ တတ်နိုင်သလောက် ချော့သိပ်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
၄။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အခေါ်အပြောမလုပ်ခြင်း (သို့) လူမှုရေးကိစ္စတွေကို ရှောင်ခြင်း
ပုံမှန်ဆို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့ ဆတ်စလူးစိန်နေတဲ့ သင့်ကလေးက အိမ်မှာပဲနေဖို့ ပြောနေသလား? ၎င်းက ကြီးပြင်းလာခြင်း (သို့) ကြောက်ရွံ့ခြင်းလက္ခဏာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျသူတွေေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ မတွေ့ဖို့ရှောင်နေခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းထွက်ခြင်းဆိုတာ သူတို့ရွေးချယ်ဖို့မလွယ်တဲ့ လမ်းဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ကအိမ်မှာပဲ ပိုကြာကြာနေကြပါတယ်။
၅။ မိဘတွေအပေါ် ရုတ်တရက် သဘောထားပြောင်းလဲခြင်း
အနိုင်ကျင်ခံရခြင်းဟာ ကလေးရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ကိုင်တွယ်ပုံမှာ အပြောင်းအလဲတွေကို စတင်ပြသနိုင်ပါတယ်။ သူတို့အနိုင်ကျင့်ခံရသူဖြစ်တယ်ဆိုရင် ၎င်းတို့က တမင်တကာမှားယွင်းသောအရာတွေကို ပြုလုပ်မိနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အနိုင်ကျင့်ခံရမှုကို မိဘတွေအပေါ် ပုံချလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်ကို ထိန်းချုပ်တဲ့နည်းလမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၆။ ပုံမှန်မဟုတ်သော ငွေကြေးတောင်းခံမှုများနှင့် တစ်ခြားအရာများ တောင်းခံခြင်း
အနိုင်ကျင့်တာက ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ လာနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စကားများ၊ လူမှုရေးကိစ္စများစသဖြင့် အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အနိုင်ကျင့်သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သားကောင်တွေကို ဖိအားတွေပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီခြိမ်းခြောက်မှုတွေရဲ့ ရလဒ်အနေနဲ့ ကလေးတွေဟာ သူတို့လိုအပ်တာထက် ပိုတဲ့အရာတွေ(သို့) ငွေပိုတောင်းတာတွေ လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။
၇။ မရှင်းပြနိုင်သော ဒဏ်ရာများ
အနိုင်ကျင့်ခံရသူတွေဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံရနိုင်ပါတယ်။ သင့်ကလေးတွေက ရုတ်တရက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း(သို့) အမာရွတ်တွေရှိတယ်ဆိုရင် ၎င်းက အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့ချက်ကျ လက်ကျမရှင်းပြနိုင်ရင် သင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့်အကြောင်းအရင်းတစ်ခုက အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းပါပဲ။
ကလေးငယ်ကို အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးဖို့ ဖြစ်နိုင်ခြေနည်းလမ်း လေးမျိုးရှိပါတယ်။
ကလေးကို အနိုင်ကျင့်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို သေချာရှင်းပြပါ။ သို့မှသာ ကလေးဟာ သူတို့ဘာလုပ်ခံနေရတယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ကြောင်း သေချာပါစေ။ သူတို့စိုးရိမ်နေရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုရင် သင့်ကို အသိပေးဖို့ ပြောပါ။
သင့်ကလေးကို စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ဝါသနာတွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖို့ တွန်းအားပေးပါ။ ၎င်းက ယုံကြည်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး လုံခြုံမှုရှိသော ကလေးငယ်တစ်ယောက်ဟာ အနိုင်ကျင့်ခံရနိုင်ခြေပိုနည်းပါတယ်။
သင်ဟာ ကလေးရဲ့ စံနမူနာကောင်းဖြစ်ပါစေ။ ကြင်နာမှုနှင့် လေးစားမှုကို ပြသပါ။ ဒါ့အပြင် ကလေးကို မတရားသော အပြုအမူတွေကို လက်မခံတတ်ဖို့ သင်ပြပါ။
Previous articleလျစ်လျူရှုရင် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ကလေးအပြုအမှု (၇)မျိုး
Next articleကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်းအလေ့အထကို အားပေးရင်း ကလေးတွေနှင့်အတူ ဘယ်လိုချက်ပြုတ်ကြမလဲ?